မိုးရာသီမှာ ကလေးငယ်တွေကို ဖျားနာခြင်းနဲ့ ကင်းဝေးအောင်ထားနိုင်မယ့် နည်းလမ်း(၅)သွယ် - For her Myanmar
သိထားရုံနဲ့ မရသေးဘူးနော်… သေချာလိုက်လုပ်ဖို့ လိုသေးတယ် 😉
အင်မတန်ပူတဲ့ နွေကနေ မိုးအေးအေးနဲ့ နှပ်လို့ရမယ့် မိုးရာသီကို ကူးပြောင်းစပြုလာပါပြီ။ အပူဒဏ် နည်းနည်းသက်သာသွားနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ မုတ်သုန်ရာသီနဲ့အတူ ပါလာတတ်တာတွေကို သတိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ အထူးဖြင့် ကလေးငယ်ရှိတဲ့ မေမေတွေပေါ့။
မိုးရာသီဟာဆိုရင် ကူးစက်နိုင်တဲ့ တုပ်ကွေးနဲ့ ပိုးမွှားမျိုးစုံ၊ ဖျားနာမှုမျိုးစုံသာမက သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်လွယ်တဲ့ ရာသီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မေမေတွေအနေနဲ့ ကလေးငယ်တွေကို မိုးတွင်းမှာ ဖျားနာမှု ကင်းပြီး ကျန်းမာအောင် ထားနိုင်မယ့် နည်းလမ်း(၅)သွယ်ရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေကတော့
(၁) ခြောက်သွေ့ပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းတဲ့ သက်တောင့်သက်သာအင်္ကျီလေးတွေ ဝတ်ပေးပါ။
မိုးတွင်းမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ မိုးကြောင့် အစိုဓာတ်တွေ များနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုချိန်မှာ ခြောက်နေတဲ့အင်္ကျီတောင် ပြန်ပြီး စိုစွတ်နိုင်သလို ပူတာကော အေးတာကော တချိန်တည်းခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကလေးအင်္ကျီကို ခြောက်သွေ့အောင် မီးပူနဲ့ သေချာတိုက်ပေးပြီးမှ ဝတ်ပေးပါ။ ကလးငယ်ရဲ့ အရေပြား အသက်ရှူချောင်အောင် ချည်သားနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အင်္ကျီ/ သိုးမွေးနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အင်္ကျီ ပွပွချောင်ချောင်မျိုးသာ ပေးဝတ်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ဒီလိုရာသီမှာ သက်တောင့်သက်သာနေနိုင်မှာပါ။
(၂) ခြင်မကိုက်မိအောင် ထားပါ
မိုးတွင်းမှာ အဆိုးဆုံးက ခြင်အန္တရာယ်ပါပဲ။ ကလေးတွေမို့ ခြင်ကိုက်လည်း မပြောတတ်၊ ခြင်ကို မရိုက်တတ်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကလေးငယ်ရဲ့ အရေပြားတွက် သီးသန့်ထုတ်ထားတဲ့ ခြင်မကိုက်ဆေးကို တနေ့ ၃ခါလောက် လိမ်းပေးသင့်သလို အိမ်ထဲမှာ ရေဝပ်တဲ့နေရာရှိရင် သေချာရှင်းလင်းတာ၊ ခြင်ဆေးခေါ်ဖျန်းတာ လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ရေဝပ်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းနေရာတစ်ခုမှ မရှိလေ၊ ကောင်းလေပါပဲ။ ရေချိုးတဲ့ အုတ်ကန်တွေရှိရင်တော့ ပိုးလောက်လန်းစားမယ့် ငါးလေးတွေ ထည့်ထားသင့်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ကလေးတွေဖျားနာရင်လည်း အိမ်မှာပဲနေပြီး အဖျားပျောက်ဆေးတိုက်တာထက် သွေးလွန်တုပ်ကွေးဟုတ် မဟုတ် သေချာစစ်ဖို့ ဆေးရုံကို တန်းသွားသင့်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာဆို သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်နေတဲ့ ကလေးအများစုဟာ နောက်ကျမှ သိရလို့ အသက်ဆုံးရှုံးသွားကြတာ များပါတယ်။
Related Article >>> ကလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်နိုင်တဲ့ မိဘတွေရဲ့ အကျင့်ဆိုးများ
(၃) လူထူထပ်တဲ့ နေရာကို ရှောင်ပါ။
လူအုပ်တွေထဲမှာ ရောဂါပိုး သယ်ဆောင်ထားမယ့်သူတွေ ပါဝင်နေတတ်ပါတယ်။ လူထူထပ်လေ ၊ ရောဂါပိုးတွေ ဟာ လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ ကူးစက်ပြန့်ပွားရ လွယ်လေပါပဲ။ မိုးရာသီရောက်ပြီဆို လေထုထဲက နေရာတိုင်းမှာ ပိုးမွှားတွေရှိနေနိုင်တဲ့ အပြင် လူအချင်းချင်းကနေတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်တာမို့ မေမေတွေအနေနဲ့ ကလေးငယ်ကို လူများတဲ့ နေရာတွေခေါ်သွားတာကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
သွားမိရင်လည်း ကလေးရဲ့လက်ကို သေချာဆေးကြောပေးတာ၊ သန့်စင်ပေးတာကို လုပ်ပေးပါနော်။
(၄) ကိုယ်ခံအား ကောင်းမွန်နေစေဖို့ မှန်ကန်တဲ့အစားအသောက်တွေကို ကျွေးပါ။
လူကြီးတွေမှာ ကိုယ်ခံအားစနစ်က စနစ်တကျတည်ဆောက်ထားပြီ ဖြစ်ပေမဲ့ ကလေးငယ်တွေမှာတော့ ကိုယ်ခံအားစနစ်က နုနယ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစားအသောက်ကို သေချာ ဂရုစိုက်ပြီး ကျွေးရပါမယ်။ ရောဂါပိုးတွေ ကပ်နေတတ်တဲ့ လမ်းဘေးစာတွေကို မကျွေးသင့်သလို အိမ်မှာ ချက်စားသည့်တိုင် အသီးအရွက်တွေကို ဆားရည်မှာ သေချာစိမ်ဆေးပြီးမှ ချက်ပြုတ်ကျွေးသင့်ပါတယ်။
formula (နို့မှုန့်) ကျွေးတဲ့ ကလေးငယ်ဆိုရင်လည်း ကျိုချက်ထားတဲ့ရေနဲ့သာ formula ကို ဖျော်သင့်ပြီး ဇွန်း၊ခက်ရင်းတွေကို စားပြီးတိုင်းရေနွေးဆူဆူမှာ ပိုးသတ်တာကိုလည်း လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။တချို့ရောဂါပိုးတွေဟာ ရေကနေ ပါလာတတ်တာမို့ပါ။
ဒါ့အပြင် မိုးတွင်းမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ နှာစေး၊ချောင်းဆိုးတာကို သက်သာစေဖို့ ကြက်သားကို ငရုတ်ကောင်း၊ ဆား၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ မုန်လာဥ စတာတွေ စုံလင်အောင်ထည့်ပြီး စွပ်ပြုတ်လုပ်တိုက်ပေးပါ။ နေ့တိုင်း တိုက်ပေးနိုင်ရင် ကောင်းပါတယ်။ ကြက်စွပ်ပြုတ်က ကိုယ်ခံအားကောင်းဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
(၅) အမေကိုယ်တိုင်က သန့်ရှင်းကျန်းမာအောင်နေပါ။
ကလေးနဲ့ အနီးကပ်ဆုံး ထိတွေ့ရတာ အမေတွေပါ။ အမေတွေ မကျန်းမာရင်၊ ရောဂါပိုး ပါလာခဲ့ရင် အမေက လူကြီးမို့ ဘာမှမဖြစ်ရင်တောင် ကလေးကို ကူးစက်ဖျားနာစေနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေးကို နို့တိုက်နေတဲ့ မိခင်ဆို ပိုလို့တောင် သတိထားသင့်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အပြင်က ပြန်လာတိုင်း လက်ကိုသေချာဆေးတာ၊ ရေသေချာချိုးတာ၊ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားရှိ ကျန်းမာအောင် နေတာလည်း ကလေးကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်အောင် ထားနိုင်မယ့် နည်းတစ်မျိုးပါပဲ ယောင်းတို့ရေ….
ကိုယ်ခံအားကောင်းတဲ့ လူကြီးတွေတောင် တုပ်ကွေးကူးစက်မှု နဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးတွေ ဖြစ်ကြသေးတာမို့ ကလေးငယ်တွေကို မိုးတွင်းမှာ သေသေချာချာ ဂရုစိုက်ဖို့လိုလာပါပြီ။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ ဘေဘီလေးတွေနဲ့ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာ မိသားစု ဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပေါစ ယောင်းတို့ရေ…
References : Parents, My Little Moppet
သိထားရုံနဲ့ မရသေးဘူးနျော… သခြောလိုကျလုပျဖို့ လိုသေးတယျ 😉
အငျမတနျပူတဲ့ နှကေနေ မိုးအေးအေးနဲ့ နှပျလို့ရမယျ့ မိုးရာသီကို ကူးပွောငျးစပွုလာပါပွီ။ အပူဒဏျ နညျးနညျးသကျသာသှားနိုငျတယျဆိုပမေဲ့ တဈခြိနျတညျးမှာပဲ မုတျသုနျရာသီနဲ့အတူ ပါလာတတျတာတှကေို သတိထားဖို့လိုပါလိမျ့မယျ။ အထူးဖွငျ့ ကလေးငယျရှိတဲ့ မမေတှေပေေါ့။
မိုးရာသီဟာဆိုရငျ ကူးစကျနိုငျတဲ့ တုပျကှေးနဲ့ ပိုးမှားမြိုးစုံ၊ ဖြားနာမှုမြိုးစုံသာမက သှေးလှနျတုပျကှေးဖွဈလှယျတဲ့ ရာသီလညျး ဖွဈပါတယျ။ မမေတှေအေနနေဲ့ ကလေးငယျတှကေို မိုးတှငျးမှာ ဖြားနာမှု ကငျးပွီး ကနျြးမာအောငျ ထားနိုငျမယျ့ နညျးလမျး(၅)သှယျရှိပါတယျ။ ဒီနညျးလမျးတှကေတော့
(၁) ခွောကျသှပွေီ့း လဝေငျလထှေကျကောငျးတဲ့ သကျတောငျ့သကျသာအင်ျကြီလေးတှေ ဝတျပေးပါ။
မိုးတှငျးမှာ ပတျဝနျးကငျြဟာ မိုးကွောငျ့ အစိုဓာတျတှေ မြားနတေတျပါတယျ။ ဒီလိုခြိနျမှာ ခွောကျနတေဲ့အင်ျကြီတောငျ ပွနျပွီး စိုစှတျနိုငျသလို ပူတာကော အေးတာကော တခြိနျတညျးခံစားရနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ကလေးအင်ျကြီကို ခွောကျသှအေ့ောငျ မီးပူနဲ့ သခြောတိုကျပေးပွီးမှ ဝတျပေးပါ။ ကလးငယျရဲ့ အရပွေား အသကျရှူခြောငျအောငျ ခညျြသားနဲ့ လုပျထားတဲ့ အင်ျကြီ/ သိုးမှေးနဲ့ လုပျထားတဲ့ အင်ျကြီ ပှပှခြောငျခြောငျမြိုးသာ ပေးဝတျသငျ့ပါတယျ။ ဒါမှသာ ဒီလိုရာသီမှာ သကျတောငျ့သကျသာနနေိုငျမှာပါ။
(၂) ခွငျမကိုကျမိအောငျ ထားပါ
မိုးတှငျးမှာ အဆိုးဆုံးက ခွငျအန်တရာယျပါပဲ။ ကလေးတှမေို့ ခွငျကိုကျလညျး မပွောတတျ၊ ခွငျကို မရိုကျတတျကွပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ကလေးငယျရဲ့ အရပွေားတှကျ သီးသနျ့ထုတျထားတဲ့ ခွငျမကိုကျဆေးကို တနေ့ ၃ခါလောကျ လိမျးပေးသငျ့သလို အိမျထဲမှာ ရဝေပျတဲ့နရောရှိရငျ သခြောရှငျးလငျးတာ၊ ခွငျဆေးချေါဖနျြးတာ လုပျဖို့ လိုပါတယျ။
ရဝေပျနိုငျတဲ့ ပစ်စညျးနရောတဈခုမှ မရှိလေ၊ ကောငျးလပေါပဲ။ ရခြေိုးတဲ့ အုတျကနျတှရှေိရငျတော့ ပိုးလောကျလနျးစားမယျ့ ငါးလေးတှေ ထညျ့ထားသငျ့ပါတယျ။
နောကျပွီး ကလေးတှဖြေားနာရငျလညျး အိမျမှာပဲနပွေီး အဖြားပြောကျဆေးတိုကျတာထကျ သှေးလှနျတုပျကှေးဟုတျ မဟုတျ သခြောစဈဖို့ ဆေးရုံကို တနျးသှားသငျ့ပါတယျ။ ဒီနိုငျငံမှာဆို သှေးလှနျတုပျကှေးဖွဈနတေဲ့ ကလေးအမြားစုဟာ နောကျကမြှ သိရလို့ အသကျဆုံးရှုံးသှားကွတာ မြားပါတယျ။
Related Article >>> ကလေးရဲ့ ကနျြးမာရေးအပျေါ သကျရောကျနိုငျတဲ့ မိဘတှရေဲ့ အကငျြ့ဆိုးမြား
(၃) လူထူထပျတဲ့ နရောကို ရှောငျပါ။
လူအုပျတှထေဲမှာ ရောဂါပိုး သယျဆောငျထားမယျ့သူတှေ ပါဝငျနတေတျပါတယျ။ လူထူထပျလေ ၊ ရောဂါပိုးတှေ ဟာ လငျြလငျြမွနျမွနျနဲ့ ကူးစကျပွနျ့ပှားရ လှယျလပေါပဲ။ မိုးရာသီရောကျပွီဆို လထေုထဲက နရောတိုငျးမှာ ပိုးမှားတှရှေိနနေိုငျတဲ့ အပွငျ လူအခငျြးခငျြးကနတေဈဆငျ့ ကူးစကျတတျတာမို့ မမေတှေအေနနေဲ့ ကလေးငယျကို လူမြားတဲ့ နရောတှခေျေါသှားတာကို ရှောငျကွဉျသငျ့ပါတယျ။
သှားမိရငျလညျး ကလေးရဲ့လကျကို သခြောဆေးကွောပေးတာ၊ သနျ့စငျပေးတာကို လုပျပေးပါနျော။
(၄) ကိုယျခံအား ကောငျးမှနျနစေဖေို့ မှနျကနျတဲ့အစားအသောကျတှကေို ကြှေးပါ။
လူကွီးတှမှော ကိုယျခံအားစနဈက စနဈတကတြညျဆောကျထားပွီ ဖွဈပမေဲ့ ကလေးငယျတှမှောတော့ ကိုယျခံအားစနဈက နုနယျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အစားအသောကျကို သခြော ဂရုစိုကျပွီး ကြှေးရပါမယျ။ ရောဂါပိုးတှေ ကပျနတေတျတဲ့ လမျးဘေးစာတှကေို မကြှေးသငျ့သလို အိမျမှာ ခကျြစားသညျ့တိုငျ အသီးအရှကျတှကေို ဆားရညျမှာ သခြောစိမျဆေးပွီးမှ ခကျြပွုတျကြှေးသငျ့ပါတယျ။
formula (နို့မှုနျ့) ကြှေးတဲ့ ကလေးငယျဆိုရငျလညျး ကြိုခကျြထားတဲ့ရနေဲ့သာ formula ကို ဖြျောသငျ့ပွီး ဇှနျး၊ခကျရငျးတှကေို စားပွီးတိုငျးရနှေေးဆူဆူမှာ ပိုးသတျတာကိုလညျး လုပျပေးသငျ့ပါတယျ။တခြို့ရောဂါပိုးတှဟော ရကေနေ ပါလာတတျတာမို့ပါ။
ဒါ့အပွငျ မိုးတှငျးမှာ ဖွဈတတျတဲ့ နှာစေး၊ခြောငျးဆိုးတာကို သကျသာစဖေို့ ကွကျသားကို ငရုတျကောငျး၊ ဆား၊ ကွကျသှနျဖွူ၊ ကွကျသှနျနီ၊ မုနျလာဥ စတာတှေ စုံလငျအောငျထညျ့ပွီး စှပျပွုတျလုပျတိုကျပေးပါ။ နတေို့ငျး တိုကျပေးနိုငျရငျ ကောငျးပါတယျ။ ကွကျစှပျပွုတျက ကိုယျခံအားကောငျးဖို့ ကူညီပေးပါတယျ။
(၅) အမကေိုယျတိုငျက သနျ့ရှငျးကနျြးမာအောငျနပေါ။
ကလေးနဲ့ အနီးကပျဆုံး ထိတှရေ့တာ အမတှေပေါ။ အမတှေေ မကနျြးမာရငျ၊ ရောဂါပိုး ပါလာခဲ့ရငျ အမကေ လူကွီးမို့ ဘာမှမဖွဈရငျတောငျ ကလေးကို ကူးစကျဖြားနာစနေိုငျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ကလေးကို နို့တိုကျနတေဲ့ မိခငျဆို ပိုလို့တောငျ သတိထားသငျ့ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အပွငျက ပွနျလာတိုငျး လကျကိုသခြောဆေးတာ၊ ရသေခြောခြိုးတာ၊ကိုယျ့ကိုယျကို အားရှိ ကနျြးမာအောငျ နတောလညျး ကလေးကို ကနျြးမာပြျောရှငျအောငျ ထားနိုငျမယျ့ နညျးတဈမြိုးပါပဲ ယောငျးတို့ရေ….
ကိုယျခံအားကောငျးတဲ့ လူကွီးတှတေောငျ တုပျကှေးကူးစကျမှု နဲ့ သှေးလှနျတုပျကှေးတှေ ဖွဈကွသေးတာမို့ ကလေးငယျတှကေို မိုးတှငျးမှာ သသေခြောခြာ ဂရုစိုကျဖို့လိုလာပါပွီ။ ကနျြးမာပြျောရှငျတဲ့ ဘဘေီလေးတှနေဲ့ စိတျခမျြးမွစေ့ရာ မိသားစု ဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပေါစ ယောငျးတို့ရေ…
Tags: Fever, Health, Kids, mom, monsoon, Protect, rainy, season, tips
Aye Mon Kyaw May 19, 2019